Ushintsho oluncane luyenza ihehe iSwift
Fanelesibonge Bengu | April 24, 2021
ISUZUKI Swift yimoto eyintandokazi kwaSuzuki njengoba ngonyaka odlule kudayiswe angaphezu kuka-16 000 emhlabeni jikelele.
ISuzuki iyaqhubeka nokundlondlobala eNingizimu Afrika, kanti nezibalo zokuthengwa kwezimoto zayo zilokhu zinyukile NgoFebhuwari badayise imoto ka-100 000 nokube yiSwift.
ISwift esemakethe njengamanje iqale ukudayisa ngo-2018 futhi lolu hlobo luke lwathola ukumotongwa kancane yinkampani, ukuze luhlale luheha abathengi.
Ushintsho lukwigrille ngaphambili efakwe ichrome bese kuthi inhlobo ebizwa ngeGA yafakwa amakhava amasondo amasha namasensor asiza ukupaka ngemuva. IGL nayo isifakwe amasensor futhi amakhasimende angakwazi ukukhetha enemibala emibili emzimbeni nasokhakhayini.
IGLX yona bayifake ikhamera, inamarimu angu-15 inch angena esikhaleni sangu-14 futhi nayo ungayithola ngemibala emibili.
Ngaphakathi zonke izinhlobo zinamawindi kagesi, air conditioning ne central locking. IGL yengeza amfog lamps nomsakazo odlala i-USB/AUX bese kuthi iGLX yona yengeze iclimate control, idunyiswa ngebhathini futhi inetouchscreen okwazi ukuxhuma kuyo iselula nge-Apple CarPlay noma i-Android Auto.
KwaSuzuki baphinde bengeza i-Electronic Stability Control (ESP) ukwengeza ezokuphepha. Ijoyina amabhreki e-ABS, brake assistance, electronic brake-force distribution nama-airbag omshayeli nomgibeli.
Injini isafana kusengu-1.2 litre kaphethroli eyi-four cylinder. Inamandla angu-61kW netorque engu-112Nm. Egabe ngakho ukonga uphethroli njengoba ngo-100km bathi iphuza amalitha angu-4.9. Ugearbox kukhona oshintshwayo nozishintshayo.
1.2 GA Manual R180 900
1.2 GL Manual R199 900
1.2 GL AMT R214 900
1.2 GLX Manual R218 900
1.2 GLX AMT R234 900
Zonke zifika neservice plan yeminyaka emibili noma u-30 000km newarranty yeminyaka emihlanu noma u-200 000km.